အန္တီကြီး - Grand Parents-Day
Home / Book / အန္တီကြီး
by Admins on January 03, 2020 in Book
ကျြန်တော်အောင်ဇ္ကော ရွက္တတ္တဲ့ကောင်လေး တစ်ယောက္ပါ ။အရွက်ကြီးသလို အေကြာက်ကြီးသူလည်ျးဖစ္ပါတယ် ။ တက္ကသိုလ် ဒုတိယနွစ်ျေဖပြီးမွ အရွက်ကြောက်ကြီးသူကေန တြေ့မေရ်ာင္တဲ့ ရွက္တတ်ယောင်ဆောင် ကြောက္တတ်ယောင်ဆောင်သျူဖစ်ြသားတယ် ။ ပထမဦးဆုံး ကျြန်တော့ကိုပညာသင်ပေးသူက သူငယ္ခ်င်းအေမ ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်ျဖစ္ပါတယ် ။ သူက တစ္ခုလတ် ကေလးတစ်ယောက်ေအမ သူယောက္က်ားက သူ့ကိုကွှာရွင်းကာ သားအတြက္လစဉ်ထောက္ပံ့ပေးပြီး သူပိုင္ဆိညင္တဲ့ငြေနွင့်အိမ္ကိုပေးထားခဲ့တယ် ။ ကျြန်တော့ရဲ့ သူငယ္ခ်င်းက ရွိန်း ရွိန်းသူရိန်ပေါ့ ။ ဒီကောင်နွင့်ကျြန်တ္ကော ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကေ်ာင်းအတူတူတက်ပြီး နေလာခဲ့ကြတာပါ ။ သူလိုဘဲ နောက္ထပ်သူငယ္ခ်င်းအရင်းကြီး ငါးယောက်ရွိပါသေးတယ် ။ မိန့်ခေလးသုံးယောက္ပါ သူတို့က သြယ်ြသယ် ၊ျဖျူပာနွင့် ခ်ယ်ရီ ဆိုပြီး မိန့်ခေလးသုံးယောက်ပေါ့ ။ ကဲ့ဗ်ာ ဇတ္လမ်းက မ်ားတော့ ကြိုပြီး သူတို့ငါးယောက္ကို မိတ္ဆက်ပေးထားရတာပါ ။ ရွိန်းအေမနွင့်ျဖစ္ပ်က္တာက ဒီလိုဗ် ကျြန်တ္ကော သူတို့အိမ္ကိုသြားပြီး ကြန်ျပူတာဂိမ်း မိုးဘိုင်းလီဂ်င္တို့ အတူဆော့နေက်လေ အဲ့ဒီနေ့က ကျြန်တော်သြားတော့ သူမရွိဘူး ။ သူ့အေဖက သူ့ကိုတောင်ကြီးတန်ဆောင္တိုင္ကို ခေါသြားတယ် ။ ကျြန်တ္ကော မသိတော့ အိမ္တံခါးကိုခေါက္လိုက္တယ် ။ အန္တီမိုးမိုးက တံခါးကို လာဖြင့်ပေးတယ် ။ အန္တီ ရွိန်းရွိလား မေးတော့ သူက မရွိဘူးသားရယ် သူ့အေဖက တောင်ကြီးတန်ဆောင္တိုင် ခေါ်သြားတယ်လေ ။ သူလည်း အခ်ိန္မရေတာ့တာကြောင့် သားကိုဖုန်းမဆက္ခဲ့တာနေမွာ လို့ျေပာပြီး သားလာလေကြယ် အထဲကိုဝင္ပါအုံးကြ လို့ခေါ်တယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း သူ့နောက္ကလိုက်ြသားတော့ လွမ်းလေ်ာက္တိုင်းခါနေတဲ့ဖင်ကြီးကို ကြည့်မိသြားတယ် ။ သူက အထဲကိုရောက်တော့မွ သားဘာသောက္မလဲ အေဖ်ာ်ရည်သောက္မလား အန္တီကေမးတော့ ဟုတ္ကဲ့ပါအန္တီ လိုျု့ပန်ျေဖတယ် ။ သူကကျြန်တော့ကျိုပုံးပြီးတော့” သားထိုင်လေကြာ တစိမ်းဆန်နေတယ် ” လို့ျေပာကာ အိမ်နောက္ကို ဝင်ြသားတယ် ။ သူဝင်ြသားပြီး ခဏ္ဏလေးအကြာမွာ အေဖ်ာ်ရည်သံဘူးကို ပေးလာတယ် ။
အန္တီကိုအခုမွ ပိုပြီး သူ့ရဲ့တစ္ကိုယ္လုံးကို ကြည့်မိသြားတယ် ။ ထမိန်အဝါ ပါးလေးကိုဝတ္ထားပြီး အက်င်္ီကလည်း သူ့ရဲ့ဘရာကျိုမင်အောင္ထိကို ဇာအက်င်္ီပါးပါးလေျးဖစ်နေတယ်သူရဲ့နို့နွစ္လုံးကလည်း ဝင်းဝါပြီး အက်င်္ီလည်ဟိုက္ထဲကေန ဖောက္ထြက္လာမလား ထင်ေရလာက်အောင္ကျိုမင်နေရေတာ့ ကျြန်တ္လောည်း ကြည့်မိသြားတယ် ။ သူကျပုံးလိုက်ပြီး ” ဟင်း..ဟင်း.သာျးမင်ရတာကို သေဘာက်ရဲ့လား ” လို့ မေးလာတော့ ” တောင်းပန္ပါတယ် အန္တီ ကျြန်တော်အဲ့လိုမ်ိုး မရည်ြရယ္ပါဘူး ” လို့ျေပာလိုက်တော့ သူက ” သား သေဘာမက်ဘူးပေါ့ ”ျေပာတော့ ရွက္စိတ်နွင့်ရောဂါ ” အရမ်းကို ကြိုက္ပါတယ် အန္တီ ” လိျု့ပန်ျေဖလိုက်တော့ အန္တီက ကျြန်တော့အနီမွာ ကပ်ပြီးတော့ လာထိုင္တယ် ။ ကျြန်တော်သတိမထားမိတာက အတြင်းခံဘောင်းဘီနွင့် အတြင်းခံဘောင္ဘီကြားကေန ကျြန်တော့ရဲ့လီးက ဖောက္ထြက္မတတ္ထို့ထြက် တော့ သူကျပုံးကာ ” သားက ရွက္တတ်ပေမဲ့ သားလီးက မရွက္ပါလားကြယ် ” လို့ျေပာကာ ဘောင်းဘီထဲကလီးကို အေပ်ါကေနပြတ်သပ် ပေးကာနားမွာ ကပ်ပြီျးေပာလာတယ် ။ သူ့ရဲ့ဆီကေန ရေမြးအေကာင်းစားရနံ့ကလည်း တခန်းလုံးကိုမြေးကြိုင်နေတယ် ။အသက် ၁၉ နွစ် ဆိုတော့လည်း တက်သြေးကြပြီး မိန့်မမလုပ္ဘူးတဲ့ ကျြန်တော့အတြက် မိန့်မတစ်ယောက်နွင့်အနီးကပ်နေရေတာ့ သိတဲ့အတိုင်းဘဲလေဗ်ာ ။ အဲ့ဒီကြားထဲအန္တီကမိုးက လီးကိုဘောင္ဘီပေါ်ကေန ပြတ်သပ်ပေးနေတာ့ ပိုပြီးအသက်ရွူသံတျြေပင်းလာတယ် ။သူက နားကိုကပ်ပြီး နားကိုလ်ာဖ်ားလေးထိုးသြင်းလိုက်တော့ ယားတာထက္ပိုပြီးဖီးတက်ြသားတယ် ။ အန္တီမိုးကျပုံးပြီး ” သားက လူပ်ိုအစစ္လား ” မေးတော့ နုတ္ကေန ” ဟုတ္ကဲ့ပါ အန္တီ ” လို့ အ္တောိျုေဖမိသြားတယ် ။ သူကထပ်ပြီး “သာားရဲ့အေမ အရြယ်အန္တီကို သားစိတ္လှုပ်ရွားတယ် ဆိုတော့ အန္တီအရမ်းပေ်္တာယ် သိလား ” လို့ျေပာကာ ကျြန်တော့လီးကို ပြတ်သပ်ပေးတာကို ရပ်ပြီး သူ့ရဲ့အခန်းကို ခေါ်သြားတယ် ။ သူအခန်းထဲကိုရောက်ြသားတော့ နွစ်ယောက်အိပ္ကုတင်ကြီးက ဆီးကာ ကြိုနေတယ် ။ သူက ကျြန်တော့ရဲ့ကို နုတ္ခမ်းခ်င်းနမ်းပြီး သူ့ရဲ့အခန်းက Tv နွင့် DVD စက္ကိုဖြင့်လိုက္တယ် ။
ဇတ္ကားထဲမွာတော့ အသက်ကြီးကြီးမိန့်မတစ်ယောက်နွင့် ကောင်လေးတစ်ယောက် လုပ်မေတဲ့အခန်းပေါ်လာတယ် ။သူက ကျြန်တော့ရဲ့အနီးကျိုပန်ပြီတော့ လွေ်ာက္လာကာ နုတ္ခမ်းခ်င်းပြီး ကုတင်ပေါ်ကို တြန်းခ်လိုက္တယ် ။ သူ့ရဲ့ထမိန်အဝါပါးပါးနွင့် ဇာအက်င်္ီကို တလွှာခ်င်းချြတ်ပြီးကုတင်ပေါ် တက္လာခဲ့တယ် ။ သူ့ရဲ့အတြင့်ခံကြားထဲကေန အေမြးတြေဘးကိုထြက်နေတယ် ။ သူက အတြင်းခံဘောင်းဘီအနက်ရောင္မွာဇာပါတဲ့ ဘရာနွင့်ဆင္တူ ဘရာကိုလည်း ချြတ္ခ်လိုက္တယ် ။ မိန့်မတစ်ယောက်ရဲ့ အဝတ္စားမဲ့တဲ့ကိုယ္ခန္ဒာကို အတိုင်းသာျးမင္လိုက်ေရတာ့ ကျြန်တ္လောည်း အေသခ်ာကို စိုက်ကြည့်မိတယ် ။ သူကျပုံးကာ ” သား ကြည့်လို့ကောင်းရဲ့လား ” လို့မေးလာတယ် ။ ကျြန်တ္ကော ” ဟုတ်အန္တီ အခုမွေတြ့ဖူးတာပါ ” လိျု့ပန်ျေဖလိုက္တယ် ။ သူက ကျြန်တော့ရဲ့ဘေးကေနထိုင်ပြီး ကျြန်တော့ရဲ့ အဝတ်အစားတြေကို ကူပြီးတော့ ချြတ်ပေးတယ် ။ မိုးပေါ်ကိုခ်ိန္ထားတဲ့ ကျြန်တော့ရဲ့ လီးက မီးဖုတ္ထားတဲ့သံခေ်ာင်းလိုဘျဲဖစ်နေတယ် ။ အန္တီမိုးက လက်နွင့်ကိုင္ကာ ဂြင်းထုပေးပြီး ” သားရဲ့လီးက အရမ်းကြီးတာဘဲ ”ျေပာပြီး သူ့ရဲ့နုတ္ခမ်းနီဆိုးထားတဲ့နုတ္ခမ်းနွစ္လြာနွင့် ငုံကာစုပ်ပေးတယ် ။ နူညံတဲ့လ်ာဖ်ားလေးနွင့်ဒစ်လေးကို ကစားပေးပြီး အာငြေ့လေး ပေးလာတော့ တောင့်မခံနိုင္ဘဲ ပြီးခ်င္လာတော့ ” အန္တီ ကျြန်တော်ပြီးတော့မယ် ”ျေပာကာ ထထိုင္ဖို့လုပ်တော့ လက်နွင့်တြန်းခ်လိုက်ပြီး ဆက္စုတ်ပေးတယ် ။ သူ့ရဲ့ပါးစမ္ထဲမွာ သုတ်ရည်တြေကို ကုန္စင်အောင္ပန်းလိုက္မိတယ် ။ သူက ထြက်သမ်ွသုတ်ရည္ကို တစ္စက္မက်န် အကုန္ကိုမြိုခ်လိုက်ပြီးမွ ” သားရဲ့ လူပ်ိုစစ္စစ်ရဲ့ အခ်စ်ရည်တြေက အရမ်းကောင်းတာဘဲကြယိ ” လို့ျေပာလာတယ် ။ ကျြန်တော့လီးက ပြီးသြားပေမဲ့ အရွိန္မေလ်ာသေးဘဲ သံခေ်ာင်းကြီးလို ထောင်နေတုန်းဘဲ အန္တီမိုးက ကျြန်တော့ကို ဆဲယြူပြီး သူ့ရဲ့နိုတြေ ဆီမွာကပ်ပေးတယ် ။ ကေလးတစ်ယောက်ေအမေပမဲ့လည်း သူ့ရဲ့နို့သီးခေါင်းတြေက အနည်းငယ်သာမဲတယ် ။ ဝင်းဝါသောအသားရောင် ပိုင္ဆိုင်သူမို့ သူ့နို့ကိုစို့ရင်းနွင့်ကို နို့သီခေါင်းတြေကေထာင္ကာ နီရဲလာတယ် ။ သူကပက္လက္လွန္ကာလွဲခ်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့အဖုတ်ကြီးဆီကို ခေါင်းကိုတြန်းပို့တယ် ။ သူ့ရဲ့စောက္ဖုတ္က အရည်တြေလဲ့နေပြီး အရည်ကြည်တြေအနည်းငယ္စိုနေပြီ ။ မဲနက်ပြီးတြန့်ကာလိမ်ကောက္တဲ့ သူ့ရဲ့အေမြးအုံကြီးကြားထဲကေန နီရဲ့ကာ လ်ုပ်ရွားနေတဲ့နေတဲ့ အေစ့လေးကို လ်ာဖ်ားနွင့်ယက်ပေးလိုက္တယ် ။
TV ဘက်ကြည့်တော့ ကောင်လေးက အန္တီကြီးရဲ့အေစ့ကို သြားန်င့်မနာအောင္ကိုက္ကာ လက်ညိုနွင့်အသြင်းအထုတ္လုပ်ပေးနေတာ့ အဲ့ဒီအတိုင်းဘဲ သူ့ကို ကျြန်တ္လောည်း လုပ်ပေးလိုက္တယ် ။ သူ့ရဲ့ျေခနွစ်ခေ်ာင်းကိုအာျးပုပြီး ကိုလေးကြကာ သူ့လက္က ကျြန်တော့ရဲ့ဆံပင်တြေကိုပြတ်သပ်ပြီး သူ့ရဲ့အဖုတ္မွာကပ်ပေးကာ ” ကောင်းလိုက္တာ သားရယ် ” ညီးကာ သူ့ဆီကေနျဖျူဖူအဖတ်တြေနွင့် အရည်တြေထြက္လာတယ် ။ သူကထထိုင်ပြီး ကျြန်တော့ရဲ့နုတ္ခမ်းမွာကပ်နေတဲ့ အရည်တြေကို အိပ်ရာဘေးက သူ့အက်င်္ီနွင့်သုတ်ပေးကာ နုတ္ခမ်းခ်င်းနမ်းလာတယ် ။ အေပ်ါကနုတ္ခမ်းခ်င်းနမ်းပေမဲ့ သူ့ရဲ့နူညံ့တဲ့လက္က ကျြန်တော့ရဲ့လီးကို ဂြင်းထုပေးတယ် ။ သူကျပန်ပြီးလွဲခ်ကာ ကျြန်တော့ကို ဆဲပြီး သူ့ရဲ့အေပ်ါကိုနုတ္ခမ်းခ်င်းနမ်းလို့ အဆင်ျေပေအာင္ထိဆဲကြာ ယူတယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း လက်ထောက္ကာ သူ့ရဲ့နုတ္ခမ်းကိုနမ်းတယ်။ သူ့ရဲ့လက္က ကျြန်တော့ရဲ့လီးကိုကိုင္ကာ သူ့ရဲ့အဖုတ္မွာ ၂ ခ်က်လောက္ပြတ္ဆဲပြီး တေ့ပေးကာ သူ့ရဲ့ျေခနွစ်ခေ်ာင်းနွင့် ကျြန်တော့ရဲ့ဖင် ကို ဆဲယြူတော့ သူရဲ့စောက္ဖုတ်ကြီးထဲကျိုဖည်ျးဖည်းခ်င်းဘဲဝင်ြသားတယ် ။ ယောက်ားတစ္ဆီမွာ ၁၁ နွစ် အလိုးမခံရတဲ့စောက္ဖုတ္က ကျြန်တော့လီးကို က်ပ္က်ပ်လေးနွင့်စီးနေတယ် ။ သူ့ရဲ့အထဲကို အဆုံးထိရောက်ြသားတော့ တစ္ခ်က္ခ်င်ျးမန်ျမန္ဘဲ ဆောင္လုပ်ပေးတယ် ။ သူက ကျြန်တော့ကိုအနမ်းရပ်ပြီးမွ ” သားရဲ့ပါကင္ကို သားသူငယ္ခ်င်းရဲ့အေမဆီမွာ အေဖာက္ခံရတာ ကြိုက်ရဲ့လား သား ” လို့ မေးလာ တယ် ။ ကျြန်တ္ကောလည်း ” အရမ်းကို ကြိုက္ပါတယ် အန္တီ ” လို့ျေပာကာ သူ့ကိုဆောင့်လုပ်ပေးလိုက္တယ် ။ ” အား.. သားရယ်.. အား… ကောင်းလိုက္တာကြယ်.. အား..ျမန်ျမန်.. အန္တီ ပြီးတော့မယ်.. အား.. မေနွးစေနဲ့. အား..ျမန်ျမန်..ဆောင့်. အား.” လို့ သူက ညီးနေတုန်းမွာဘဲ သူမပြီးခင္မွာ ကျြန်တော်ပြီးသြားတယ် ။ ကျြန်တော်ပြီးသြားပေမဲ့လည်း လီးကက်င်ပေမဲ့လည်း ထပ္ကာ အခ်က် ၂၀ ခန့် ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက္မွ သူလည်း ပြီးသြားတယ် ။ သူနွင့်အေမျာေဖကာ ဖက်ပြီး နွစ်ယောက်သား ကုတင်ပေါ်မွာ မွိန်းနေကြေတာ့တယ် ။ ” သားက အခုဆိရင် လူပ်ိုရည္ပ်က်ြသားပြီဟား. ” လို့ ရယ္ကာ ပါးကိုနမ်းလာတယ် ။ကျြန်တ္လောည်း သူ့ရဲ့ပါးကိုနမ်းလိုက်ပြီး ” ဒိလောက္တဲ့အရသာ ကျြန်တ္မောတြ့ဘူးသေးဘူး အန္တီ ” လို့ျေပာလိုက်တော့ သူက ” အဲဒါထက်ကောင်းတာတြေပါ အန္တီကလုပ်ပေးမယ်နော်သား ”ျေပာပြီး ပေ်ာကာ အနားယူနေတဲ့လီးကို ကိုင္ကာ သူ့ရဲ့ဘေးကေန သူရဲ့ညအိပ်အက်င်္ီရွည္ကို ယူကာသုတ္လိုက္တယ် ။
ပြီးမွဘဲ တံတြေးလေးထြေးကျာဖူဖြေးကာနူညံတဲ့သူ့ရဲ့ လက်နွင့်ဂြင်းတိုက်ပေးတယ် ။ ညီလေးကဘယ်နေနိုင္မလဲ ဒေါသတကြီးနွင့်ခေါင်းထောင္လာတယ် ။ အေမရိကန္ကဒုံက်ည်တြေ ဒုံပ်ံတြေ ထက္ကိုပိုပြီး ထောင္တက္လာတယ် ။ သူက ကျြန်တော့ရဲ့နုတ္ခမ်းကိုနမ်းကာ လီအေပ်ါကေနခြကာ အရည်တြေသုတ်ပြီးအရည်တြေထပ်ပြီ စိုလာတဲ့အဖုတ်ကြီးမွာ ပြတ္တိုက်ပြီးတော့ အဆုံထိရောက်အောင်ျဖည်ျးဖည်းခ်င်းထိုင္ခ်လိုက္တယ်။ ကျြန်တော့လီးက သူ့ရဲ့အဖုတ္ထဲကိုဝင်ြသားတာကိုကြည့်နေတုန်းမွာ ကျြန်တော့လက္ကိုဆဲပြီး အုန်းသီးအငယ္စားလောက်ရွိတဲ့နို့တြေကို တင်ပေးတယ် ။ကျြန်တ္လောည်း သူ့ရဲ့နို့တြေကိုဆဲကြာ အောက္ကေနပင့်ကာလိုးပေးလိုက္တယ် ။ သူက အေပ်ါကန တစ္ခ်က္ထထိုင် လုပ်ပေးလိုက် စေကာ့ဝိုင်းလွည့်ပေးလိုက် လုပ်ပေးတယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း သူ့နို့တြေကိုဆုပ္ကာပေးတယ် ။ ” အား.ကောင်းလိုက္တာဗ်ာ ” လို့ျေပာလိုက်တော့. သူက ” အား.. အန္တီလည်း အရမ်းကောင်းတယ်သား ” လို့ျေပာကာ စေကာ့ဝိုင်းကျိုမန်ျမန္လွည့်ပေးတယ် ။ သူက အဲ့လျိုမန်ျမန္လွည့်လေ အရသာပိုတြေ့လာပြီး ပြီးခ်င္လာတယ် ။ ” အား..အန္တီ ကျြန်တော်ပြီးတော့မယ် ” လို့ျေပာလိုက်တော့ သူကရပ်ပြီး ” သား အန္တီကို အေနာက္ကေနျမန်ျမန်ဆောင့်ပေး.. အန္တီလည်း ပြီးတော့မယ် ”ျေပာကာ လက္ကို ခေါင်းအုံးပေါ်မွာ လက္ပိုက်သလို လက်ကြေးကာ ထောက်ပေးတယ် ။ ဖင်ကြီးကော့ကာပေးတာ့ သူ့ရဲ့အဖုတ်ကြီးက အျပင္ကိုထြက္လာတယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း လီးကိုသူ့ရဲ့ အဖုတ္မွာတေ့ပြီး သူ့ခါးကိုကိုင္ကာ ဆောင့်ထည့်လိုက္တယ် ။ ” အား..သားရယ်..” တစ္ခ်က်ညီးကာ နောက်ျပန်ဆောင့်ပေးလာတယ် ။ကျြန်တ္လောည်း သူ့ရဲ့ခါးကိုကိုင္ကျာမန်ျမန်ဆောင့်ကာ လုပ်ပေးတယ် ။ သူက ” အား..သား..မရပ္နဲ့ အဲ့အတိုင္ဘျဲမန်ျမန်ဆောင့်ပေး.” လို့ျေပာလာတော့ ပိုပြီးအရွိန္တင္ကာဆောင့်လုပ်ပြီး သူ့ရဲ့အဖုတ္ထဲမွာ ဆည္က်ိုလို့ ရေတြထြက်ြသားသလိုဘဲ သုတ်ရည်တြေပန်းကာ ပြီးသြားတယ် ။ အဲ့နေ့က တေန့လုံး နားလိုက္လိုးလိုက်နွင့် ၅ ခ်ီတိတိလုပ္လိုက္တယ် ။ ညေန အိမ်ျပန္ခါနီမွာ ကျြန်တော့ပါးကိုနမ်းပြီး ” အားရင် အန္တီဆီ လာခဲ့နော် ” လို့ျေပာတယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း ဟုတ္ကဲ့ပါ အန္တီလို့ျေပာကာ အိမ်ျပန္ခဲ့တယ် ။ အိမ်ျပန်တော့ အခန်းကိုဝင္ကာ ခဏ္ဏအိပ် ညေနစားပြီး အိပ်ရာဝင္ကာအိပ္လိုက်တော့တယ် ။ ကျြန်တော့ရဲ့အိမ္မွာက သားအဖနွစ်ယောက္ဘဲနေကြတာ အိမ်ကြီးထဲမွာ အျမဲတမ်းကို တိတ္ဆိတ်နေတယ် ။ ထမင်းခ်က်ကြီးကြီမေက ခ်က်ျပုတ်လေ်ာ်ဖြတ်ပြီးရင်ျပန်ြသားတယ် ။ ကျြန်တော့အေမက ကျြန်တ္ဆောယ္တန်းနွစ် မွာနွလုံးရောဂါကြောင့် ဆုံးသြားတယ် ။
အေဖကလည်း အလုပ္ကိုသြာျးပန္လာရင်အရက်သောက် ဆိုတော့ သားအဖနွစ်ယောက်နေတဲ့အိမ် ဘယ္ကိုသာယာပါ့မလဲ ။ ကျြန်တော်ျေပာတဲ့ သူငယ္ခ်င်းအေမေတြက ကျြန်တော့ကိုဂရုစိုက်ပေးကြလို့သာ ကျြန်တ္ကောစိတ္ဓတ္မက်ဘဲ ဆယ္တန်းကို အမွတ်ကောင်းကောင်းနွင့်အောင်ျမင္ခဲ့တယ် ။ ကျြန်တ္တောို့သူငယ္ခ်င်းငါးယောက်ျပန္ဆုံပြီးတော့ သြယ်ြသယ်အိမ္မွာ သြယ်ြသယ်ရဲ့မြေးနေ့ပဲမြွာ ကကြခုန်ကြနွင့် အခ်ိန်တြေကုန္တယ် ။ သူ့ရဲ့အိမ္မွာ သူငယ္ခ်င်တြေအိပ်နေက်ဆိုတော့ ပုံမွန္လျိုဖစ်နေတာ့ ရွိန်းနွင့်ကျြန်တ္ကောတစ္ခန်း သြယ်ြသယ်နွင့်နောက်နွစ်ယောက္က တစ္ခန်းအိပ်ကြတယ် ။ သြယ်ြသယ္တို့ကျြေးတဲ့ ဝိုင်တြေသာက်ပြီး ရွိန်းကအိပ်ရာပေါ်မွာ ဟောက်နေပြီ ကျြန်တ္လောည်းတေရးနိုးတော့ သေးပေါက္ခ်င္လို့ အိမ်သာကို ယိုင္တိုင္တိုင်နွင့်သြားလိုက္တယ် ။ အိမ်သာထေဲကိုဝင္ကာ သေးပေါက်ပြီျးပန္ထြက်တော့ အန္တီထားက ထမိန္ကိုချြတ်ပြီး ရေတစ္ဖလားသြန်ပြီး ကျြန်တော့ကိုကြည့်နေတယ် ။ ကျြန်တ္ကောလည်း သေးပေါက်ပြီး ထြက္လာပေမဲ့ လီးတောင္တာ မေလ်ာဘဲ ဂ်င်းဘောင်းဘီးထဲကေနေဖာင်းထြက်နေတယ် ။ အန္တီထားရဲ့ အဝတ္စားမဲ့ခန္ဒာကျိုမင်တော့ ပိုဆိုးပြီး ဘောင္ဘီထဲကေန ဖောက္ထြက္မတတ်ျဖစ္လာတယ် ။ သူက ဟာ ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့နို့တြေနွင့် စောက္ဖုတ္ကို လက်နွင့်ဖုံးလိုက္တယ် ။ ကျြန်တ္ကောလည်း “”တောင်းပန္ပါတယ် အန္တီ “”ျေပာပြီးထြက္ခဲ့တယ် ။ အဲ့ညက တစ်ညလုံးအိပ္လို့မေပ်္ဘာူး အန္တီထားရဲ့အေမြးမရွိတဲ့စောက္ဖုတ်ကြီး နွင့်ျဖူဖြေးကာအနီရောင်နို့သီးခေါင်းလေးတြေက မ်က္လုံးထဲကေနမထြက္ဘူျးဖစ်နေတယ် ။ မနက္မိုးလင်းတော့ အန္တီထာျးပင်ပေးတဲ့ မနက္စာကို သူငယ္ခ်င်းငါးယောက်နွင့် အတူစားပေမဲ့လည်း အန္တီထားရဲ့အေနာက်နေ သူ့ရဲ့ ကောက်ကြောင်းအလွကို ကြည့်နေမိတယ် ။ အရင္တုန်းက ဘာစိတ္မွမရွိပေမဲ့လည်း တစ္ခါစားဖူးတော့လည်း သိတဲ့အတိုင်းပါဘဲ အဲ့ဒီစိတ် လူတစ္ကိုယ္လုံးကိုစိုးမိုးနေတယ် ။ အန္တီထားနွင့်မ်က္လုံးခ်င်း ဆုံမိတော့လည်း အန္တီထားကို မကြည့်ရဲ့ဘဲ အကြည့်လျြဲထားမိတယ် ။ သူကလည်း မေန့ညက ဘာမွ မျဖစ္ခဲ့သလိုဘဲ ပုံမွန္လိုဘဲ ဆက္ဆံတော့မွ စိတ်သက်သာရာ ရသြားမိတယ် ။ အားလုံးစားသောက်ပြီးအိပ္ကျိုပန္လာခဲ့ကြတယ် ။
အေဖက ကုမဏ္ဏီကလူကြီးဆိုတော့လည်း နယ္ကိုထြက်ြသားရင် ၁၀ ရက်လောက်ကြာတတ္တယ် ။ သူငယ္ခ်င်းတြေ ရောက္လာပြီး ပေ်ာ်ကြေပမဲ့ ကျြန်တ္ကောဖ်ားနေတာ့ ၅ ယောက္ဂိမ်ျးဖစ္တဲ့ မိုဘိုင်းလီဂ်င်ဆော့တော့ နိုင္ပဲကြနည်းတယ် ။ ကျြန်တ္ကော မိးဘိုင္လီဂ်င်ဆော့ရင် MPV ထက် SAVE ကို ရေအာင်ယူတော့ သေရင္လည်းတအားသေပြီး အနိုင်ရတာမ်ားကြတယ် ။ အဲ့နေ့ကေတာ့ ကျြန်တော်ခေါင်းကိုက်တော့ အရွုံးပဲတြေ့ပြီး သူတိျု့ပန်ြသားကြတယ် ။ သူတိျု့ပန်ြသားပြီး ၁၅ မိနစ်အကြာမွာ အန္တီထား ကျြန်တော့ရဲ့အိမ္ကို ရောက္လာတယ် ။ အိမ္တံခါးခေါက်တော့ သြားပြီးဖြင့်ပေးတယ် ။ အန္တီထားက အိမ္ထဲကို ဝင္လာပြီး ” သား နေမေကာင်းဘူး သြယ်ြသယ်ျေပာလို့ လာခဲ့တာ ” လို့ျေပာကာ အိမ္ထဲကိုဝင္လာတယ် ။ ဟုတ်အန္တီထား လို့ျေပာကာ ဆက္တီကိုသြားတော့ အန္တီထားက ” နေမေကာင်ရင် အိပ်ရာကို သြားကာနပါသားရယ် မင်းက လေကြာင့်ထင္တယ် အန္တီထားနွိပ်ပေးမယ် သားရေ့်ကသြား ”ျေပာကာ ကြန်တော့ရဲ့အခန်းဆီကိုဘဲ သြားလိုက်ကြတယ်အခန်းထဲရောက်တော့ ကျြန်တ္လောည်း အိပ်ယာပေါ်တက္ကာ ပက္လက်အိပ်တော့ အန္တီထားက ” သားမေ်ာက်ပေး” လို့ဆျပာတော့ ကျြန်တ္လောည်း ခေါင်းအုံပေါ်မာလက္ပိုက်ပြီး ခေါင်းထောင္ကာ မောက်ပေးလိုက္လိုက္တယ် ။ အန္တီထားက ဇတ်ကြော ဆဲပြေးတော့ ခေါင်းမူးတာနည်းနည်းသက်သာသြားတယ် ။ ကျြန်တော် သက်သာလာပြီး အန္တီထား လို့ျေပာလိုက်တော့ သူ့ရဲ့လက္ကျေခကေနစပြီး နွိပ္နယ်ပေးတယ် ။ လေခ်ဉ်တြေတက္ကာ သက်သာသြားတယ် ။ ခေါင်းကိုက္တာသက်သာသြားပြီး လီးကေတာင္လာတယ်။ အဲ့ဒါကမွဂြက်တာ အန္တီထားက ” ပက္လက်နေပး ”ျေပာတော့ အတြင်းခံဘောင်းဘီ ဝတ္မထားတော့ ညီလေးက သူ့ရဲ့နူညံ့တဲ့လက် နွိပ္နယ္မူကြောင့် လီးကေသြးတဒုတ္ဒုတ္ခုန္ကာ တောင်နေပြီ အန္တီထား သားအဆင်ျေပပါပြီျေပာပေမဲ့သူက အတင်းဘဲ ပက္လက်နေ ခိုင်းတော့ ပက္လက်နေလိုက်တော့ မိုးပေါ်ထောင္ခ်င်နေတဲ့လီးက လြတ္လပ္ခြင့်ရသြားတော့ ရာရွားကဒုံးက်ည္လို အေမရိကန္ကိုလည်း ဂရုမစိုက္ဘဲ သူထောင္ခ်င်သလို ထောင်နေတာ့တယ် ။ အန္တီထားလဲ မိုးပေါ်ထောင်နေတဲ့ညီလေးကို မ်က္လုံးမလဲဘြဲစိက်ကြည့္တယ် ။
ကျြန်တ္လောည်း ရွက်ရွက်နွင့်ျပန်မွောက္ကာနေဖို့လုပ်တော့ အန္တီထားက မေမွာက်စေဘဲ ညီလေးကို ဘောင်းဘီအေပ်ါကေန ပြတ်သပ် ပေတာ့ လီးကပိုပြီး ဟိုရမ်ီးရမ်းနွင့်ျဖစ္လာတယ် ။ ယောက္က်ားကနိုင်ငျံခားသေဘာသား ဆိုတော့ သူလည်းဆာလောင်နေပုံပါဘဲ ။ သူကပြတ်သပ်ရုံမကဘဲ ဘောင္ဘီဇေ့ကိုဆဲခ်ြပြီး ညီလေးကိုထုတ်ကြည့်ကာဂြင်းတိုက်ပေးတယ် ။ သူ့ရဲ့နုတ္က “” သားရယ် “” လို့ျေပာပြီး ကျြန်တော့ကိုကြည့် လက်နောက္တစ္ဘက်နွင့် ပါးကိုဆဲလြိမ္လိုက္တယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း အန္တီထားကို ဆဲကြာနုတ္ခမ်းခ်င်းနမ်းတယ် ။ သူကလည်း အားက်မခံလွ်ာကိုသြင်းကာ ကျြန်တော့လွ်ာကိုလာထိကာ ကစားပေးတယ် ။ သူ့ကိုနမ်းတာရပ္လိုက်ပြီး သူ့ကိုအိပ်ရာပေါ်လွဲခ် “” အန္တီထား ကျြန်တ္လောုပ္ခ်င်ပြီဗ်ာ “” လို့ျေပာလိုက်တော့ သူကပါးကို ဆဲပြီး “” မင်းကို ဘယ်သူကမလုပ္နဲ့လို့ တားနေလို့လဲ “” လိျု့ပန်ျေပာကာ သူကထပြီး သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတြေကို ချြတ္လိုက္တယ် ။ကျြန်တ္လောည်း အဝတ်အစားတြေကို ချြတ္လိုက္တယ် ။ သူ့ကို ပက္လက္လွဲခ်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့အေပ်ါကေန လက်ထောက္ကာ မွောက္ခ်လိုက္တယ် ။ ဒေါသေတြထြက်ပြီး အနီးရောင်တောက်နေတဲ့လီးကို အန္တီထားရဲ့စောက္ဖုတ္ဆီမွာတေ့ကာ သြင်းလိုက္တယ် ။ သူရဲ့အရည်တြေစိုနေလို့ အေပ်ါကိုခေ်္ကာာ ထြက်ြသားတယ် ။ “” လုပ္ခ်င္တာလည်းဗ်ာ လုပ္လိုက်တော့လည်း တလွှဲကြီး “”ျေပာုာ သူ့လက်နွင့်ကိုင္ကာပေးတယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း ဆောင့်ကာသြင်းလိုက်တော့ အဆုံးထိကို ဝင်ြသားတယ် ။ “” အား..သားရယ်.. အရမ်းဘဲ ဒီမွာအောင့်သြားတယ် “” လို့ သူကျေပာတော့ “” ဆော်ရီပါ အန္တီ “”ျေပာပြီး မလုပ္ဘဲ သူ့ကို နုတ္ခမ်းခ်င်းနမ်းတော့ သူက ကေ်ာ့ကိုလက်နွင့်အေပ်ါသတ်ပေးတယ် ။ အနမ်းကိုခြာလိုက်ပြီးမွ “” ပထမေတျာ့ဖည်ျးဖည်းဘဲလုပ်နော် မင်းလီးက အန္တီယောက်ားထက် ပိုကြီးတယ် “” လို့ျေပာတော့ ရင်တြေ ခုန်ြသားတယ် ။ “” ဟုတ္ကဲ့ပါ အန္တီ “” လို့ျေပာပြီျးဖည်ျးဖည်းခ်င်းဘဲ လုပ်ပေးလိုက္တယ် ။ ယောက်ားက ၆ လ ၁ နွစ် သေင်္ဘာတက်မေတာ့လည်း သူကဆာနေမွာပေါ့တြေးမိတယ် ။ ကေလးနွစ်ယောက်မြေးထားပေမဲ့လည်း ဗိုက္ခြဲ မြေးထားသျူဖစ်သလို တစ္လက္ကိုင် ဂ်ပန်အမ်ိုးစားအဖုတ်ကြီးမို့ စီးပြီးက်ပ်နေတာဘဲ ။ ကျြန်တ္လောည်း ၂ မိနစ်လောက်သျာဖည်ျးဖည်း လုပ်ပေးပြီးနောက္မွာ သူ့နုတ္ခမ်းကိုနမ်းပြီးတေျာ့မန်ျမန်ဆောင့်လုပ္ကာ ပြီးသြားတယ် ။
သူ့စောက္ဖုတ္ထဲကို အရည်တြေပန်းလိုက်တော့ ကျြန်တော်ပြီးသြားတာကို သူသိပြီး “” အန္တီလည်း ပြီးခါနီပြီ သားရယ် သားကျမန်ျမန်ပြီးသြားတယ် “”ျေပာတော့ မခံခ်င္စိတ်ျဖစ္လာပြီး သူ့ရဲ့အထဲကေန လီးကိုမထုတ္ဘဲ ဆက်ပြီးတေျာ့မန်ျမန္ဘဲဆောင့်လုပ်ပေးလိုက္တယ် ။ လီးကက်င်ပေမဲ့လည်း သူ့ကိုဆက္လုပ်တော့ သူပြီးသြားမွဘဲသူ့အေပ်ါမွာ မွိန်းကာနေလိုက္တယ် ။ သူကလည်း ကျြန်တော့ကိုတင္က်ပ္စြာ ဖက္ထားတယ် ။ တက်သစ္စလူငယ်ျဖစ်သလို ဂ်ိုးကလည်းထောင္တဲ့အရြယ္မို့ သူ့ရဲ့စောက္ဖုတ္ထဲမွာစိမ္ထားတဲ့လီးက ပေ်ာ့မသြားဘဲထောင်နေတယ် ။ သူ့ကိုအေပ်ါကေနပြီး စတင္ကျာဖည်ျးဖည်းခ်င်းလုပ်ပေးလိုက္တယ် ။သူကလည်ျးပန်ပြီးတော့ အောက္ကေနပင့်ကာခံပေးလာတယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း သူ့ကိုနုတ္ခမ်းခ်င်းနမ်းပြီး အေပ်ါကေနလုပ္တာကိုရပ်ပြီး ထိုင္လိုက္ကာ သူ့ရဲ့ျေခနွစ်ခေ်ာင်းကို ခါးမွာတင်ပြီးသူ့နို့ကို ဆုပ္ကိုင္တယ် ။ ညို့မ်က္လုံးနွင့်ကြည့်နေတဲ့သူ့ကျိုပန္ကာကြည့်ပြီး နို့ကိုဆုပ္ကိုင္ကာ ကြမ်းကြမ်းနွင့်ျမန်ျမန်ဆောင့်လုပ်ပေးတယ် ။ သူက အားက်မချံပန်ပြီးတော့ ညီးသံလေးနွင့်ျေပာလာတယ် ။ “” အား..ရွီး..အောင်ဇော်ရယ်.. အန္တီကောင်းနေပျြီမန်ျမန်ဆောင့်ပေး အား..”” လို့ ညီးရင်းနွင့် စည်းခ်က်ညီအောင် သူကလည်းလည်း လုပ်ပေးတယ် ။ သူ့နို့ကိုဆုပ္ကိုင္တာကိုဖယ္လိုက္ကာ သူ့ရဲ့ပေါင္ကိုတင်းတင်းဖက်ပြီးဆောင့်လုပ်ပေးလိုက္တယ် ။ ပြီးခ်င္စိတ္ကျဖစ္လာတယ် သူရဲ့နို့ကျေပးလြားနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ အာရုံျေပာင်းကာ ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူရဲ့လက်သည်းတြေနွင့် ကျြန်တော့ရဲ့လက္ကိုညစ္ကာ ဒုတိယအကြိမ်ပြီးသြားတယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း ဆက်ပြီး တင်းမခံနိုင်တော့ဘဲ “” အား..အန္တီထား.ကျြန်တော်ပြီးတော့မယ် အား. “” လို့ သူ့ကိျုေပာလိုက်တော့ သူက လှိုက်မောသံလေးနွင့် “” ပြီးလိုက်သား..အန္တီအထဲမွာ ပြီးလိုက် အန္တီသားကြျောဖတ်ပြီးသား “” လို့ သူကျပန်ျေပာတော့ ခန္ဒာကိုယ္ထဲကေန လွည္ပတ်နေတဲ့သြေးတြေဟာ သူ့အထဲကိုစုပြီးပန်းလိုက်သလား မွတ်ေရလာက်အောင် ပန်းလိုက္တယ် ။ သူ့အေပ်ါကိုမွောက္ခ်လိုက်တော့ သူက ကျြန်တော့ရဲ့ဆံပင်တြေကိုပြတ်သပ်ပေးပြီး နဖူးကျိုဖည်ျးဖည်းလေးနွင့်အခ်ိန်တော်ကြာအောင္ဘဲ နမ်းပေးလာတယ် ။ အရာသာကိုတြေရွိသူနွင့် ဇရက်တောင္ပံက်ိုးတြေ့တော့ အဲ့နေက နောက္ထပ်နွစ္ခ်ီ လုပ္လိုက်ကြေသးတယ် ။ ကျြန်တော်ဟာ အန္တီထားနွင့်အန္တီမိုးတို့ရဲ့ အခ်စ်တော်ျဖစ္လာခဲ့တယ် ။
သူတို့ရဲ့အိမ္ကိုသြားလို့ လူရွင်းရင်အဝတ်အစားတြေချြတ်ပြီး နေရာစုံလုပ်ကြသလို လူမရွင်းရင် ကျြန်တော့အိမ္မွာလုပ်ကြတယ် ။ ကျြန်တော့အိမ္မွာ အေဖကအေနသိပ္နည်းတော့ ကျြန်တော့အိမ္မွာ လုပ်ျဖစ္တာမ်ားပါတယ် ။ သူငယ္ခ်င်းတြေမရိပ္မိကြဘူးလေ ။ ကေ်ာင်ျးပန္ဖြင့်မွဘဲ အန္တီတို့နွင့်ဝေးသြားခဲ့ရတယ် ။ အေဖကအလုပ်ျေပာင်းကာ ရန္ကုန်မြို့မွာ နေကြတယ် ။ ရန္ကုန်ရောက်တော့ အေဖက အရင်အိမ္ကိုရောင်ပြီးျေမာက္ဒဂုံဘက္မွာ တိုက္ခန်းတစ္ခန်းကို ဝယ္လိုက်တော့ အဲ့ဒီမွာနေရတယ် ။ ရန္ကုန္မွာက သိတဲ့အတိုင်းဘဲလေ ဘေးအခန်းမွာ ဘယ်သူနေမွန်းတောင် မသိကြဘူး ။ အေဖက အလုပ်နွင့် နယ္ကို ထြက်သလို ကျြန်တ္လောည်း တက္ကသိုလ္တက်ရတယ် ။ တက္ကသိုလ္ကို ရောက်တော့ သူငယ္ခ်င်းအသစ် ၃ ယောက် ရတယ် ။ျဖူဖြေးလို့ခေါ်တဲ့ တစ်ယောက်ရယ် ပိုးဟပ်ျဖူရယ် နေမ်ိုးရယ် ။ ကျြန်တ္တောို့လေးယောက္က စားသောက်နောက်ကြရင်းနွင့် ငယ်သူငယ္ခ်င်းတြေလို ခင်ြသားကြတယ် ။ျဖူဖြေးက အသားမည်းတယ္ဗ် ။ သူက ကုလားလေ သူ့အသားအရည္က မီးသြေးနုရောင္ဆိုတော့ သူ့ကို ခ်စ္စနိုးနွင့်ျဖူဖြေးခေါ်ကြတယ် ။ နောက္တစ်ယောက် ပိုးဟပ်ျဖူက တရုတ္ဗ် အသားတြေက စက္ကူလျိုဖူပြီး လမ်းလေ်ာက်ရင် ဘယ်နေမွာထိုးလဲသြားမလဲထင်ရတဲ့လူနာလို အဲ့ကြောင့်သူ့ကို ပိုးဟပ်ျဖူလို့ခေါ်ကြတယ် ။ နေမ်ိုးကေတာ့ မ်က္လုံးနွစ္လုံးက ဘယ္တစ္လုံးညာတစ္လုံး ဆိုတော့ သူကြည့်ရင် ၃၆၀ ‘ ကျိုမင္တဲ့အတြက် နယ္ကအမ်ိုးတြေ ဘာလုပ်နေတယ္ဆိုတာကျိုမင်နိုင္တယ္လို့ စေနာက်ရာမွ နေမ်ိုျးဖစ်ြသားတယ် ။ျဖူဖြေးအမည္ကေတာ့ ထြန်းလင်းသူတဲ့ ဟားဟား တကယ္ကို ထြန်းလင်းတဲ့ အသားရောင္ကို ပိုင္ဆိုင္တယ်လေ ။ ပိုးဟပ်ျဖူအမည္က ရွောင်ရွင်းတဲ့ တရုတ်အမည်ျမန္မာအမည္ကေတာ့ ထက်အောင္ပါ ။ နေမ်ိုးရဲ့အမည္ကေတာ့ နေမ်ိုးပါဘဲ ။ ကျြန်တော့ကို သူတို့က သရဲလေးဘဲ ခေါ်ကြတယ် ။ တက္ကသိုလ္မွာ တပတ်အတြင်းမွာ ခင်ြသားပေမဲ့ ညီအကိုအရင်းတြေလျိုဖစ်ြသားကြတယ် ။ ကျြန်တော့အိမ္မွာက လြတ္လပ်တော့ ပိုးဟပ်ျဖူ ယူလာတဲ့အော့ကားတြေကြည့် ပြီးရင် ဘယ်စ္ကောို ဘယ္လိုလိုးလိုက်ရရင် ကောင်းမွာဆိုတဲ့ ကေ်ာင်းကေစ်ာတြေရဲ့အမည်တြေကိုရြက္ကာျေပာပြီး ပေ်ာ်ပေ်ာ်နေကြတယ် ။ တေန့တေျာ့ဖူဖြေးက သူ့အမရဲ့မဂင်္လောင်ရွိတယ်ျေပာပြီး သူ့အိမ္ကိုခေါ်သြားတယ် ။ျဖူဖြေးတို့ကအရမ်း ခ်မ်းသာကြတယ် ။ သူအေဖမွာ ကုမဏ္ဏီနွစ္ခုတောင်ရွိတယ် ကေ်ာင်းကိုလာရင္လည်း လက္ဆပ်ကြီးနွင့်ကိုလာတာ ။ ကျြန်တော်ကေတာ့ သူတို့အထဲမွာ အဆင်းရဲဆုံးမိသားစုလို့ျေပာလို့ရတယ် ။
ဇတ္လမ်းတောင် ပ်က်ြသားသလား မသိဘူး ကျဲ့ပန္စမယ္ဗ်ာ ။ျဖူဖြေးရဲ့အိမ္ကို ရောက်ြသားတော့ သူတို့အိမ်ရွေ့ကျခံကြက္လပ်ကြီးထဲမွာ စားပဲခြုံတြေစီရံပြီးတော့ ခ်ထားတယ် ။အိမ္ကလည်း နန်တော်အလားဘဲဗ်ာ နည်းတာကြီးမဟုတ် အခန်း ၆ ခန်းအထိရွိတယ် ။ နွစ္ထပ် လုံးခ်င်းတိုက်ကြီးလေ ။ သူ့ရဲ့အမနွင့် သူ့ယောက္ဖေလာင်းကို မိတ္ဆက်ပေး ပြီးမွ သူ့အေမကို မိတ္ဆက်ပေးတယ် ။ သူ့အေမက ကုလားဆက်လေးနွင့် အသားကို ဖြေးကာဝင်းနေတာပါ ။ သူနွင့်က လားလားမွမတူဘူး ။ မိတ္ဆက်ပြီးတော့မွာ အန္တီသီတာ ကေနပြီး သူ့ကျိုဖူဖြေးက ကျြန်တ္တောို့တြေအေကြာင်းကိုျေပျာပထားကြောင်ျးေပာလာတယ် ။ ကျြန်တ္တောို့က အငြိမ္မေနဘဲ ကူညီကာ လုပ္ကိုပေးတော့ သူတို့မိသားစုတြေက အရမ်းခင်ြသားကြတယ် ။ ပိုးဟပ်ျဖူ အေဖကိုတြေ့လိုက္မွ အေဖတူသားဆိုတာသိလိုက်ရတယ္ဗ် ။ မီးသြေးခဲရဲ့ အနုရောင်နွင့်အရင်ကြားထဲက လူကြီဗ် ။ သူ့အမည္က ထြနးတောက္တဲ့ ဟားဟား တကယ္ကိုမီးထြန်းရင် အနက်ရောင္လဲ့ပြီး တောက္မဲ့သူလေ ဟား..ဟား.. သူတို့အမမဂင်္ဆောင္မွာ ကူညီရင်းနွင်း အထြက်အဝင္တိုင်းမွာ အန္တီသီတာနွင့် ကျြန်တ္ကောသြားပြီးတော့ နေရာလုရတာ ကြုံတယ် ။ တံခါးတစ္ခုမွာလူနွစ်ယောက် ပြတ္တိုက်သလိုဘဲ စားပဲတြေယူပြီးထြက္လာရင် နွစ်ယောက္တူတော့ တစ္ခါတရံ တေတာင္ဆစ္က အန္တီသီတာရဲ့ ပေ်ာအိနေတဲ့နို့ကိုသြားတိုက္မိတယ် ။ စားဖူးတော့အရသာသိနေတာ့လည်း သူရဲ့အေနာက္ကေန ဟင်းပဲတြေလိုက်ပေးသလိုနွင့် ဘ္ဒောီကို လွမ်းခ်ိုးကြည့်တယ် ။ ဗိုက်ခေါက် နည်းနည်းထြက်ရုံကလွှဲလို့ နို့ရောဖင်ရောျေပာစရာကို မရွိတာဗ်ာ ။ အတြင်းခံဘောင်းဘီက အေကာင်းစားမို့ တ္တောန်ရုံဘောင္ဘီဆိုရင်ျပဲကာ လီးကေငါ့ထြက်နေမွာ အေသခ်ာဘဲ ။ သူ့အမလည်း အရမ်းခေ်ာတော့ စိတ်နွင့်ကို သမီးရောအေမေရျာပစ္မွားနေမိတယ် ။အဲ့လိုနွင့် မဂင်္လာပဲလြာ သမိးစောင့်အကြိုက ပြီးသြားတယ် ။ လူက ရင္နီးတဲ့အိမ္နားတြေမို့ စားပဲဝြိုင်းက ၇ ဝိုင်းလောက်သာရွိတာကျိုဖူဖြေးက ဒါဘော် ဘလက် အရက္တစ္လုံးယူလာပြီး စားပဲဝြိုင်းမွာ ထိုင္ကာ လူလေးယောက္ကစ်ကြတယ် ။ အမအလိုးခံရမွာကို အေတာ့ပေ်ာ်နေတျဲ့ဖူဖြေးက အမ်ားကစ္ကာ အရင္ဆုံးမူးသြားတယ် ။ ပိုဟပ်ျဖူက လူသာပိန္ပိန်နွင့်ရေဂါသည် အရက္က်တော့ ရေမေရာဘူး ကစ္လိုက္တာဘဲ ။ နေမ်ိုး က သိပ္မေသာက်နိုင်တော့ သူလည်းမူးသြားတယ် ။ျဖူဖြေးအမ ရွှေစင္ကအရက်နောက္တစ္လုံးပေးလာတော့ အေးဆေးဘဲ ရေခဲရောကာ ကျြန်တော်သောက်ပေမဲ့ ရေမေရာဘဲ ပလိန်းကစ္တဲ့ ပိုးဟပ်ျဖူလည်း မွောက်ြသားတယ် ။ သူက အေကာင်းစားတြေသာက္လာတာလေ ။
ကျြန်တ္ကော ကျြန်တ္တောို့မြို့မွာနေတုန်း ခ်က်အရက် အဦးရည်သောက္လာတာမို့ ဒါတြေ အေးဆေးလို့တောင်ျေပာလို့ရတယ် ။ ခ်က်အရက္က မီျးခစ်လေးနွင့်တိုက်ရင်တောင် မီထေလာင္တာကိုဗ် ။ တရုတ်တြေက သိုင်းကားတြေ မွာ ဝါးရြက္စိမ်းအရက် အေကာင်းဆုံျးေပာတာကို သေဘာက်ပြီး ကျြန်တ္ကော ခ်က်အရက္ကို ဝရဇိန္လို့ပေးထားတယ် ။ အရက်ဠီကာဖြင့် သလိုတောင်ျဖစ်နေပြီ ။ ပထမဦးဆုံျးဖူဖြေးနွင့်နေမ်ိုးကို အခန်းထဲကိုပို့ပြီး ဆက်သောက်နေကြေတာ့ ပိုဟပ်ျဖူမူးတော့ ပိုးဟပ်ျဖူကိုတြယ် နေမ်ိုးရဲ့အခန်းကို ပို့ပေးကျာဖူဖြေးအခန်းမွာဘဲ ဝင်အိပ္လိုက္တယ် ။ တေရးနိုးပြီး ရေအဝေသာက္ကာ သေးသြားပေါက္တယ် ။ျပန်ပြီး ထြက္လာတော့ အန္တီသီတာနွင့်ဆုံတယ် ။ လူကလည်း အရက်ရွိန်နွင့်ရီတီတျီဖစ်နေတာ အန္တီသီတာရဲ့ ညဝတ်အိပ္တဲ့ဂါဝန္ကလည်း ပါးပါးလေးဆိုတော့ ဘာအတြင်းခံမွ ဝတ္မထားတဲ့သူ့ရဲ့အလွကို အတိုင်းသာျးမင်နေရတယ် ။ သူက အိမ်သာခန်းထဲကိုဝင်ြသားတယ် ဂ်က္လည်းခ်သံမကြားလိုက်တော့ ကျြန်တ္လောည်း အိမ်သာထဲကိုဝင္လိုက္တယ် ။ ရေခ်ိုးခန်းနွင့် အိမ်သာက တဲရြက္မို့ ဒေါင့်လေးကပ္ကာ သူသေးပေါက္တာကို စောင့်နေလိုက္တယ် ။ တရွဲရွဲနွင့် သူလည်း အေတ္ကာိုသေးပေါက္ခ်င္လို့ ဆင်းလာပုံဘဲ ။ သူရေးဆေးပြီး အျပင္ထြက်တော့ သူ့ကိုဆဲကြာ နံရံမွာကပ်ပြီး နုတ္ခမ်းခ်င်းနမ်းလိုက္တယ် ။ ပထမေတာ့သူက ရုန်းကန် ပေမဲ့လည်း လွ်ာခ်င်းထိတြေ့ကာ ကစားပးလိုက်တော့ သူ့လက္ကငြိမ်ြသားတယ် ။ အကူညီလုပ်ပေးတုန်းက မေတ္တာဆပြတ္တိုက္ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့စောက္ဖုတ်ကြီးကို အခုတော့ အဝတ်နွစ္လျြာခားကာ ဖိကပ်ပြီး ပြတ္တိုက်ပေးထားတယ် ။ကျြန်တ္လောည်း အခ်ိန်သိပ္မဆဲဘြဲ ဇေ့ကျိုဖုတ္ကာ လီးကိုထုတ္လိုက္တယ် ။ သူ့ရဲ့စောက္ဖုတ်ကြီးထဲကို ဖိကာ နမ်းရင်းနွင့်ဆောင့်သြင်းပေးလိုက္တယ် ။ စီပြီးတင်းက်ပ်နေတယ် ဒါတောင္မွ အရည်တြေစိမ့်ထြက်နေလို့သာပေါ့ ။ သူ့ရဲ့လက်တောကြ ကေ်ာ့ပေါ်မွာ ဓတ္လိုက္တဲ့သူလို ပြတ်သပ္ကာ ပေးလာတယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း သူ့ကို အ္မေွာာစိုးတာကြောင့် နံရံမွာကပ်ပြီး မတ္တပ္ကိုဆ္ထောည့်လိုက္တယ် ။ သူက အနမ်းကိုရပ်ပြီး “” မောင်..မမေမာတ်ာကြယ် “” လို့ျေပာတော့ ကျြန်တ္လောည်း အရမ်းပေ်ာ်သြားတယ် ။
သူ့ကို ရေခ်ိုးခန်းရဲ့ကြမ်ျးပင်ပေါ်မွာ လွဲခ်ကာ ဘောင်းဘီကိုချြတ်ျပစ္လိုက္ကာ လီးကိုသူ့စောက်ဖောင်းကြီးထဲကို ထိုးထည့်လိုက်တော့တယ် ။ “” အား..မောင်ရယ် “” လို့ ညီးသံလေး ထြက္လာတယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း သူ့ရဲ့အေပ်ါကေန သူ့ကိုနမ်းရင်းနွင့်ျမန်ျမန္ဘဲ ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက္တယ်။ သူ့စောက္ဖုတ္ထဲကေန ညစ်ညစ်ပေးပြီးတော့ ကျြန်တော့ကေ်ာ့ကို လက်သည်းနွင့်ကုပ္ကာ ပြီးသြာတယ် ။ “” အား..မောင်ရယ် “” လို့ ညီးပြီးငြိမ်ြသားတယ် ။ သူ့ကို ဆက္လက်ပြီး အခက် ၄၀ ခန့်ဆောင့်လုပ်ပြီး သုတ်ရည်တြေ သူ့စောက္ဖုတ္ထဲကို ပန်းကာ ကျြန်တ္လောည်း ပြီးသြားတယ် ။ နွစ်ယောက္လုံးအေမျာေပေတာ့မွ အဝတ်အစားတျြေပန်ဝတ္လိုက်ကြတယ် ။ အန္တီသီတာက ကျြန်တော့ရဲ့ပါးနွင့် နုတ္ခမ်းကိုနမ်ပြီး သူက “” လူကို ဘယ်အခ်ိန္ကတည်း ဒီလိုလုပ်ခေ်ာင်းနေတာလဲ မသိဘူး လူဆိုးလေး “” လို့ျေပာကာ သူ့အခန်းကျိုပန်ြသားတယ် ။ ကျြန်တော် အခန်ျးပန္လာတေျာ့ဖူဖြေးက ပုဆိုးကလည္ပင်ပေါ်ရောက်နေပြီး လီးမဲမဲက ပေါ်နေတယ် ။ အဲ့ကောင္လီက ကျြန်တော့ထက် ၂ လက္မ လောက္တိုမွာကို သိလိုက္တယ် ။ တရွူးရွူးနွင့် အိပ်ပေ်ာ်နေတဲ့ သူဘေးကဆင်းကာ ကုလားထိုင်ပေါ်မွာဘဲ အိပ္လိုက်တော့တယ် ။ မနက် စောစော နိုးလာပြီး အဝတိအစားတြေလွဲကာ မဂင်္လာဆောင္မဲ့ဟ္တောယ္ကို သြားလိုက်ုကတယ် ။ အန္တီသီတာကေတာ့ တစ္ခါတစ္ခါ သူ့ယောက်ားရဲ့အလစ္မွာ မ်က္လုံးနွိပ်ျပလိုက်သေးတယ် ။ ပဲပြီးသြားတော့ အန္တီသီတာက ကျြန်တော့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ္ကို တောင်းတယ် ။ သူက “” ဖုန်းဆက္လိုက္မယ် မောင် “” လို့ နားမွာကပ္ကာ တိုးတိုးလေးျေပာသြားတယ် ။ သူ့ရဲ့နောက်နေ သူ့ရဲ့ဖင္ကိုကြည့်ပြီးတော့ ဟင်း နောက္တစ္ခါဆိုရင် အဲ့ဖင်ကြီးကို မလှုပ်နိုင်အောင္ကို လိုျးပစ္လိုက္မယ် တြေးကာ ကြည့်နေလိုက္တယ် ။ျဖူဖြေးအမ မဂင်္လာဆောင်ပြီး ၂ ရက်အကြာမွာ အန္တီသီတာက ဖုန်းဆက္လာတယ် ။ သူက ဟ္တောယ္ကို မသြားခ်င္ဘူးလို့ျေပာတော့ ကျြန်တော့ရဲ့အိမ္လိပ္စာကို ပေးကာ ခ်ိန်းထားလိုက္တယ် ။ ကံကောင်းတယ္ဗ် အန္တီသီတာ ဖုန်းဆက်တော့ ဘေးမွာ သူ့သာျးဖူဖြေးက ရွိနေတယ်လေ ။ ခဏ္ဏကြာ အေဖနွင့်ငါ ဖုန်ျးေပာအုံးမယ် လို့ျေပာကာ အလွမ်းဝေးတဲ့နေရာရောက္မွဘဲ အိမ္ကို ခ်ိန်းလိုက္တယ် ။
သူတို့ဆျီပန်ြသားတေျာ့ဖူဖြေးက သူ့စော်နွင့်ခ်ိန်းကာ ရုပ်ရွင်ကြည့်ဖို့ ခေါ်တော့ မလိုက်တော့ဘူး အေဖခိုင်းတာလုပ္စရာရွိတယ္လို့ ညာကာ အိမ္ကို တန်ျးပန္ခဲ့တယ် ။ အိမ္ကိုရောက်တော့ ခဏ္ဏအနားယူပြီး ရေခ်ိုးကာ လီးကို ဆပ်ျပာနွင့်တိုက္ကာ မ်က်နွာသုတ္ပဝါပတ်ပြီး ထြက္လာတော့ အိမ်ရွေ့က ဘဲလ္တီးသံကြားတယ် ။ တံခါးထဖြင့်တော့ အန္တီသီတျာဖစ်နေတာ့ သူ့ကို တစ္ခါတည်း အိပ္ခန်းကို ခေါ်သြားတယ် ။ အခန်းကိုရောက္တာနွင့် သူ့ရဲ့အနက္ထမိန်နွင့်အျပာရောင်အက်င်္ီကို ချြတ္ခ်လိုက္လိုက္တယ္လ။ သူရဲ့ဘောလီကိုချြတ္ကာ ကုတင်ပေါ်ကို ကုတင်ပေါ်ျဖာ်ျးဖည်းလေးခ်ပေးလိုက္တယ် ။ ပြီးမွဘဲ သူ့ရဲ့အနက်ရောင္ဇာပင္တီကို ချြတ်ပေးလိုက္တယ် ။ ဖောင်းကြကာထပြီးခုန်တော့မဲ့ အတိုင်းဘျဲဖစ်နေတဲ့ စောက္ဖုတ်ကြီးကိုနမ်းပေးလိုက္တယ် ။ သူက အလိုးခံရမွာမို့ ကြိုပြီးတော့ စောက္ဖုတ္မွာ ရေမြးစြတ္ခဲ့ပုံဘဲ မြေးရနံ သင်းထုံနေတယ် ။ စောက္ဖုတ်နွခမ်းနွစ္ခုကို လက်နွင့်ျဖဲပြီး လ်ာဖ်ားလေးကို အတြင်းသားတြေကို အေပ်ါအောက်ယက်ပေးလိုက္တယ် ။ သူက “” အား..ရွီး..မောင်ရယ်..”” လို့ ညီးသံလေးထြက္လာပြီးတော့ ဆံပင်တြေကို ပြတ်သပ်ပေးလာတယ် ။ သူ့ကိုယက်ပေးသလိုဘဲ ကျြန်တ္ကော လီးကိုဂြင်းတိုက္ထားတယ် ။ လီးက မာပြီးတောင့်လာတော့ သူ့ရဲ့နုတ္ခမ်းပိုနမ်းပြီး လီးကို သူ့ရဲ့စောက္ဖုတ်ကြီး အထဲကို အဆုံးထျိဖည်ျးဖည်းခ်င့် ဆောင့်သြင်းလိုက္တယ် ။ “” အား..မောင်ရယ်..ျပည့်သိပ်နေတာဘဲကြယ် “” လို့ ညီးလာတယ် ။ သူ့စောက္ဖုတ္ထဲကေန အရည်တြေလိုက္လာတော့ သူ့ကျိုမန်ျမန္ဘဲ ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက္တယ် ။ သူကလည်း အောက်နုတ္ခမ်းကိုသြား နွင့်ကိုက္ကာ တင်းခံတယ် ။ ကျြန်တ္ကောလည်း သူ့ကိုရဲ့အေရွ့အေနာက်ျေပးလြာနေတဲ့နို့ကြီးတြေကို ကြည့်နေရာမွ လက်နွင့်ဆဲကြာ နသိုးကြိုျးပတ်ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တော့ “” အား..ရွီး…မောင်ရယ်..ကောင်းလိုက္တာကြာ..အား..ရွီျးမန်ျမန်..မမပြီးတော့မယ် “” လို့ျေပာလာတော့ အရွိန္မေလ်ာတော့ဘဲ ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လုပ္ကာ သုတ်ရည်တြေကို သူ့ရဲ့အထဲမွာပန်းပြီး ပြီးသြားတယ် ။သူ့အေပ်ါကို မွောက္ခ်ကာ အေမျာေဖကာ မွိန်းနေလိုက္တယ် ။ သူက လှိုက်မောသံလေးနွင့် တင်းတင်းဖက္ကာ “” အရမ်းခ်စ္တယ် မောင်ရယ် “” လို့ျေပာလာတယ် ။
ကျြန်တ္ကောလည်း “” အရမ်းခ်စ္တယ် အန္တီရယ် “” လို့ နုတ္ကေန ထြက်ြသားတော့ သူက “” လူကို ဖြတ္ဖြတ်ကြေပြီ စောက္ဖုတ်ျပဲအောင် ကြမ်းကြမ်းလိုးပြီးမွ အန္တီလား မောင်ရယ် မမလို့ဘဲျေပာင်းခေါ်ပါကြယ် “” လို့ျေပာလာတော့ ဟုတ္ကဲ့ပါ မမ လိျု့ပန်ပြီျးေပာင်းကာ ခေါ်လိုက္တယ် ။ သူ့အေပ်ါကေန မွိန်းနေတာ အေမျာေပေတာ့ ဘေးကိုလိမ့်ဆင်းကာ ပက္လက္ကေလး နေလိုက္တယ် ။ အန္တီသီတာရဲ့လက်တြေက ကျြန်တော့ရဲ့ရင္ဘတ်ပေါ်မွာ ပြတ်သပ္ကာ ကစားပေးနေတုန်းမွာ သူက “” မောင္က မမကို သမီးလေးပဲမြတိုင္ခင်ညက ခ်စ်ပေးတာ အရမ်းကြမ်းတာဘဲကြယ် မမေလ အဖုတ်တြေတာင် က်ဉ္စပ်နေတာဘဲ “”ျေပာတော့ ကျြန်တ္ကောလည်း သူ့ဘက္ကို လွည့်ကာ ပါးကိုနမ်းလိုက်ပြီးမွ “” မမက အဲ့ညက ကြမ်းခ်င္စရာကြီးကို လွေနတာလိျု့ပန္ကျာေပာလိုက္တယ် သူက နွာခေါင်းကို မနာအောင္ဆြဲ နဖူးကိုလက်နွင့်ခပ္ဖြဖြထုကာ “” မမေလ အဲ့ဒီညက တစ်ကြိမ္တည်း အလုပ္ခံရတာနွင့်ကို မောင့်ခ်စ်ြသားတယ် သိလား မောင် “” လို့ သူကျေပာလာတေျာ့ပုံးကာ “” မသိပါဘူး “” လို့ျေပာလိုက်တော့ “” သြား လူဆိုးလေး “” လို့ျေပာကာ အိပ်ရာကေန ထသြားတယ် ။ သူရဲ့နောက္ကေန ထကာလိုက်ြသားပြီး အယ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဖင်ကြားမွာ ညီလေးကိုညှပ်တော့ “” မောင်အရည်တြေကို လက်နွင့်ခံပြီး ရေခ်ိုးခန်း သြားနေတာကြ အရည်တြေကြမ်ျးပင် က်ကုန္လိမ့်မယ် “” လို့ျေပာကာ နောက်ျပန္ကိုယ်နွင့်ခါကာ ရေခ်ိုးခန်းကိုျေပးကာဝင်ြသားတယ် ။ သူျေပးသြားတော့ တုံခါနေတဲ့ဖင်ကြီးကိုကြည့်ပြီး လီးကထပ်တောင္လာတယ် ။ သူ့နောက္ကေနလိုက်ပြီး ရေခ်ိုးခန်းကို ဝင္လိုက္တယ် ။ သူက သူရဲ့အဖုတ္ကို ဆပ်ျပာနွင့်ဆေးနေတုန်းမွာ သူ့ကိုလွမ်းပြီး ဖက္လိုက္တယ် ။ “” ဒီမွာဆေးလို့ မပြီးသေးဘူး မောင် ခဏ္ဏစောင့် “” လို့ျေပာပြီး သူရဲ့စောက္ဖုတ္ကိုရော အေမြးတြေကိုရော ဆေးကြောတယ် ။ သူဆေးပြီးမွ ကျြန်တော့ရဲ့ အရည်တြေပေနတဲ့ လီးကိုသူ့လက်နွင့်ကိုင်ပြီး ဆေးကြောပေးတယ် ။ ကျြန်တ္ကော သူ့ကို “” မမ မောင့်လီးကို စုတ်ပေးပါလား “” လို့ျေပာလိုက်တော့ သူက ခေါင်းညွိတ္ကာ လီးကိုလွမ်း ကိုင္ကာ စုတ်ပေးတယ် ။ လ်ာဖ်ားလေးက လီးထိပ္ကအကဲကြောင်းလေးကို ထိုးသြင်းပြီး ဒစ္ဖ်ားကိုနုတ္ခမ်းနွင့်ဖိဖိကာစုတ်ပေးတယ် ။ “” အား..ကောင္လိုက္တာ မမရယ် “” လို့ ညီးယူရတဲ့အထိကို အရသာကောင်းတယ် ။ ကျြန်တော်ညီးတော့ သူက ပိုပြီးဖိကာစုတ်ပေးတယ် ။ “” အား.မမ ရပ်တော့ “” လို့ သူ့ကိုတားယူလိုက်ရတယ် ။
သူ့ကို ဆဲထြူကာ နံရံမွာကပ်စေပြီး သူ့အေရွ့မွာ ဒူးထောက္ကာ အေရွ့ကို မို့ပြီးဖောင်းနေတဲ့စောက္ဖုတ္ကို လ်ာဖ်ားလေးနွင့်ကေလ်ာပေးလိုက္တယ် ။ “အိုး..မောင်ရယ်..” လို့ ညီးသံလေးထြက္လာတယ် ။ ဆေးကြောထားလို့ ဆပ်ျပာရနံက သူ့ရဲ့အဖုတ္ကို မြေးနေစတယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း သူ့ရဲ့အရည်တြေစိုလာတော့မွ ထရပ္ကာ လီကိုကိုင်ပြီး သူ့စောက္ဖုတ္ထဲသို့ ဆောင့် သြင်းလိုက္တယ် ။ “အား..ရွီး..မောင်ရယ်. “” လို့ ညီးကာ လက်နွစ္ဘက္က လည္ပင်းမွာ တဲခြိုကာ ခေါင်းကိုပခုံးမွာ တင္လာတယ် ။ျေခတစ္ဘက္ကို ဘေးနံရံမွာကန္ထားစေပြီး သူ့ကိုဖိကပ္ကာ ကြမ်းကြမ်းဘဲဆောင့်လုပ်ပေးလိုက္တယ် ။ “” အား..ရွီး..မောင်ရယ် “” လို့ ညီးရင်းပိုပြီးတင်းတင်းလေးဖက္လာတယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း သူ့ကတင်းတင်းဖက်လျေမန်ျမန်ဆောင့်လေ ဆောင့်လလုပ်ပေးတယ် ။ သူက “” အား..ရွီး..မောင်ရယ်… မမ.. ပြီးခ်င္လျာပန်ပြီကြယ်.. အား..မောင်ရယ်..ျမန်ျမန်ဆောင့်ပေးပါ..အား..မောင်ရယ်..ျမန်ျမန် “” လို့ ညီးရင်းနွင့် တင်းတင်းဖက္ထားတဲ့သူ့လက်တြေက ခါးကိုကိုင္ကာ လက်သည်းတြေနွင့်ညှစ်ရင်း သူပြီးသြားတယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း သူ့ကို နောက္ထပ် အခ်က် ၂၀ ဆောင့်လုပ္ကာ ပြီးသြားတယ် ။ နံရံမွာကပ်ပြီး အလုပ္ခံရတဲ့သူ့ရဲ့ ဒူးတြေက ပေ်ာခြေလာတော့ သူ့ကိုထိန်းကာ ရေခ်ိုးကြမ်ျးပင္မွာ နွစ်ယောက်သား လွဲကာ နေလိုက်ကြတယ် ။ အေမျာေပေတာ့မွ သူ့ရဲ့စောက္ဖုတ္ကို ကျြန်တော်ကေဆးပေးလိုက္တယ် ။ နေမထိတဲ့သူ့ရဲ့စောက္ဖုတ်ကြီးက အကဲကြောင်းတစ်ဝွိက္မွာ နီရဲနေတယ် ။ သူက “” အဲ့ဒါ မောင့်ကြောင့် မောင္က ကြမ်းကြမ်းလုပ္လို့ အဲ့လျိုဖစ္တာ “” လို့ျေပာလာတယ် ။ ကျြန်တ္ကောလည်း သူ့ကို “” မောင္က ကြမ်းကြမ်းလုပ်ပေးရတာ မမက ကြမ်းကြမ်းလုပ်ပေးတာ ကြိုက္တယ် ဆိုလို့ပေါ့ “” လိျု့ပန်ျေပာလိုက္တယ် ။ ရေခိ်ုးခန်းထဲမွာ သူက ကိုယ္လက္မ်က်နွာသစ်ပြီး အိပ္ခန်းကို ဝင်ြသားတယ် ။ ကျြန်တ္ကော ရေခ်ိုးပြီး ထြက္လာတော့ သူက သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတြေကျိုပန်ဝတ်ပြီး ကျြန်တော့ပါးကိုနမ်းကာ အိမ်ျပန်ြသားတယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း ညေနစာခ်က်ျပုတ္ကာ စားသောက္ကာ တခ်ိုးတည်းအိပ္လိုက် တော့တယ် ။
အေဖက နယ္ကို အလုပ္ကိစ္စနွင့်ခရီးထြက်ြသားတော့ အိမ်နွင့်နီးတဲ့ဈေးကေန ဝယ်ျခမ်းကာ ခ်က်ျပုတ်ပြီး စားသောက်ရတယ်။ အိမ္မ်က်နွာခ်င်းဆိုင္တိုက္ခန်းတံခါး ပြင့်လာတော့ ကျြန်တော်ကြည့်မိတယ် ။ အသက် ၃၉ အရြယ် အန္တီတစ်ယောက္ထြက္လာတယ် ။ သူကျပုံျးပပြီး “” သားက ဒီအခန်းကလား “” မေးတော့ ဟုတ္ကဲ့ပါ အန္တီလို့ျေဖလိုက္တယ် ။ သူက “” သားကတက္ကသိုလ်ကေ်ာင်သား ထင္တယ် “” လို့ျေပာတော့ ဟုတ္ကဲ့ပါ အန္တီ “” တတိယနွစ်…..မေဂ်ာပါ “” လို့ျေဖလိုက်တော့ “” ကြိုးစားနော်သား “” လို့ျေပာကာ “”ဪ သားက အခ်က်အျပုတ္လည်း ကောင်းပုံဘဲ သားအခန်းကေန ခ်က်ျပုတ္တဲ့အနံတြေရတာ အန္တီတောင္ဗိုက္ဆာတယ် “” လို့ သူကျေပာတော့ “” ဟုတ်အန္တီ သားအဖနွစ်ယောက်နေတဲ့အိမ် ဆိုတော့လည်း ခ်က္တတ်အောင် ကြိုးစားရတာပါ “” လို့ သူ့ကျိုပန်ျေပာလိုက္တယ် ။ သူကလည်း “” … ဆေးရုံက ဆရာဝန် တစ်ယောက္ပါ အန္တီအမည္က ဒေါ်နွင်းဆီပါ သား “” လို့ျေပာကာ အောက္ကို ဆင်းသြားတယ် ။ ကျြန်တ္ကောလည်း ကေ်ာင်းကို သြားတာမို့ တံခါးပိတ်ပြီး သူ့နောက္ကေန လိုက္ဆင်းတယ် ။ သူက မတ္တူးကားအျဖူလေးကိုမောင်းပြီး ထြက်ြသားတယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း ကေ်ာင်းကိုလာခဲ့တယ် ။ ကေ်ာင်းကိုရောက်တော့လည်း စာသင်ပြီးနားခ်ိန်ရောက်တော့ ကန္တင်းကို သြားလိုက်ကြတယ် ။ ကန္တင်းမွာ စားသောက်ကြရင်ျးဖူဖြေးကသူ့စော်နွင့်လေ်ွာက္လည်ပြီး ဟ္တောယ္ဘြတ္ခဲ့တာကိုျေပျာပတယ် ။ သျူေပာတော့ စိတ္ကေန “” မင်းအေမ အန္တီသီတာကို မေန့က ငါကြမ်းကြမ်း ၂ ခ်ီ ဘြတ်ပေးလိုက္တယ် “” လို့ တြေးကာ ရယ္လိုက္တယ် ။ သူကေတာ့ သူ့စ္ကောို ဘြတ္တာကို ရယ်ရလို့ ရယ္တယ် ထင်နေတယ် ။ အားလုံးစားသောက်ပြီးမွ အခန်းကျိုပန္ကာ ဝင္လိုက်ကြတယ် ။ စာသင္ခ်ိန္မွာ ဂရုတစိုက်သင္လို့ စာတြေကို သိပ်ပြီးက်က္စရာမလိုအောင်ျဖစ်နေတဲ့ကျြန်တ္ကော အခန်းထဲမွာ စာတ္တောဲ့ကေ်ာင်းသား မဟုတ်သလို စာညံ့တဲ့ကေ်ာင်းသားလည်း မဟုတ္ဘူး ။ ရုပ်ရည္ပိုင်းကလည်း မင်းသားဂျြန်စောလိုမ်က်နွာနွင့် ဆင္တူတော့ စော်တြေရဲ့တိုးတိုျးေပာကာ ငေးကြည့်ရတဲ့သူတစ်ယောက်လေ ။ ( ခိ ခိ အျပင္မွာတော့ ရုပ္ဆိုးတယ် ဇတ္လမ်းမွာတော့ ခေ်ာမွကို ရမွာဗ် အာ့လယ်အာ့လယ် ဟား ဟား ) ဝတ္တာကေတာ့ အက်င်္ီအျဖူရောင် နွင့် ပုဆိုးဘဲ ဝတ္တယ်လေဗ်ာ ။
အမ်ားသူငါကြားထဲမွာ ပိုပြီးပေါ်လြင္တာပေါ အာကြောင့်လည်း စော်တြေက ပိုပြီးကြိတ်ကြေကြတာ ။ သူသူ လို့ ခေါ်တဲ့ ကောင္မေလးတစ်ယောက္ကို ကျြန်တ္လောည်း ရင္ခုန္မိသြားတယ် ။ျပုံးလိုက္တိုင်းမွာ ခ်စ္စရာကောင်ပြီး အရမ်းဟော့တဲ့သူကို ကြိုက္တာသူငယ္ခ်င်းတြေက သိတယ် ။ သူတို့နွင့်အတူ အဲ့ကောင္မေလးနောက္ကို လိုက်နေတာကြာပြီဗ် ဖြင့်ပြီးတော့သာ မျေပာသေးတာျေပာလိုက်ရင္လည်း အဆင်ျေပဖို့က မ်ားတယ် ။ ကျြန်တ္ကောသူ့ကို ဖြင့်ျေပာဖို့သြားတိုင်းမွာ သူဘေးမွာဘဲတစ္ဘြယ္က အျမဲတမ်းပါတော့ မျေပာဘျဲပန္လျာဖစ္တယ် ။ ကျြန်တ္လောည်း ကေ်ာင်းကအျပန္မွာ အိမ္ကျိုပန္လာတော့ အေဖေရာက်နေတယ် ။ အေဖက “” သား လာအုံးကြယ် “” လို့ျေပာတော့ သူဆီကို သြားလိုက္တယ် ။ သူက “” သားအတြက် အေဖ ဘဏ္မ်ာငြေတြအပ္ထားတယ် အေဖ ဘုန်ကြီးဝင်ပြီး တရာအားထုတ်တော့မယ် သားအတြက် ကေ်ာင်းစရိတ္လိုအပ်ရင် သြားထုတ္ပါကြယ် “” လို့ျေပာကာ ဘဏ္စာအုပ္ကို ပေးတယ် ။ သူက ဘဏ္စာအုပ္ကို ပေးပြီးမွ “”သား ကေ်ာင်ပြီးအောင်အထိ အေဖ မေစာင့်ရွောက်နိုင်ပေမဲ့ သားအတြက် အိမ်နွင့်ငြေတြက သားကေ်ာင်းပြီးတဲ့အထိ လောက်ငွမွာပါ “”ျေပာပြီး သူ့ရဲ့ဘေးက အထုတ္ကိုယူကာ ….ဘုန်ကြီးကေ်ာင်းမွာ တရာအားမွာျေပာပြီး ထြက်ြသားတယ် ။ အေဖကလည်း အသက်ကြီးပြီ ဆိုတော့လည်း တရားဘာဝနာပြားနေတာက နောင္ဘဝအတြက္လည်း ကောင်းပါတယ္လို့ တြေးမိသလိုဘဲအထီးက်န္ဆန္တဲ့ဘဝကိုလည်း တြေးကာအားငယ္မိတယ် ။ အေဖထြက်ြသားပြီးနောက္မွာ သူကိုလိုက္ပို့စရာ မလိုဘူျးေပာတော့ မလိုက်ျဖစ္ဘဲ အိမ္မွာဘဏ္စာအုပ္ကိုင္ကာ ငေးပြီး က်န္ခဲ့ရတယ် ။ မနက္ခ်က္ထားတဲ့ ဟင်တြေကိုနြေးပြီး ထမင်းကိုခ်က္ကာ ရေခ်ိုးခန်းထဲကို ဝင္ကာရေကိုစိမ်ပြီးခ်ိုးလိုက္တယ် ။ အဝတ်အစားတြေဝတ်ပြီး စားသောက္ဖို့အတြက်ျပင္ဆင်နေတုန်းမွာ ဘဲတီးသံကြားတော့ တံခါးကိုသြားဖြင့်ကြည့်တယ် ။ အိမ်ရွေ့အခန်း အန္တီနွင်းဆျီဖစ်နေတယ် ။ သူ့ရဲ့လက္ထဲမွာလည်း ဟင်းတစ္ခြက္ပါလာပြီး လာပို့တျာေပာတော့ သူ့ကို အိမ္ထဲဝင္ပါ အန္တီလို့ျေပာကာ တံခါးကိုဖြင့်ပေးတော့ သူက ဝင္လာတယ် ။
သူ့ကို ဧည့်ခန်းထဲကထိုင္ခုံပေါ်မွာ ထိုင်စေပြီး သူ့ရဲ့ဟင်းခြက္ကို ပုဂံတစ္ခုမွာထည့်ပြီး ကျြန်တ္ခော်က္ထားတဲ့ ဟင်းကို သူ့ရဲ ပုဂံမွာထည့်ကာ ပေးလိုက္တယ် ။ သူ့ကို ကေ်းဇူးတင္စကားတျြေပာပြီး စကားနည်းနည်ျးေပျာဖစ်ပြီးဖုန်းနံပါတ်တြေလည်း အျပန်အလွန္ဘဲ ပေးကြတယ် ။ သျူပန်ြသားမွဘဲ စားသောက္ကာ အေတြးနယ္ခ်ဲရင်းနွင့် အိပ်ပေ်ာ်သြားတယ် ။ နောက်နေ့တော့ ပုံမွန်အတိုင်းကေ်ာင်းကို သြားဖိျု့ပင္ကာ အျပင္ထြက်တော့ အန္တီနွင်းဆီနွင့် ဆျုံပန္တယ် ။ အန္တီဆီကျပုံျးပသလိုဘဲ ကျြန်တ္လောည်ျးပုံးကာ မဂင်္လာပါအန္တီ လို့ သူ့ထက်စောကာ နုတ္ဆက္လိုက္တယ္လ။ သူကလည်ျးပန်ပြီး “” မဂင်္လာပါ သားရယ် “” လို့ နုတ္ဆက္တယ် ။ သူနွင့်လွေကားပေါ်ကေနအတူဆင်းလာကြေတာ့ အန္တီနွင်းဆီက “” သား အခ်ိန်ရရဲ့လား “” မေးတော့ ကျြန်တ္မေွာာ အတန်းခိန္က ၁၁ မွ စမွာမို့ သူ့ကို ရပါတယ် အန္တီလို့ျေပာလိုက်တော့ သူ ကျြန်တော့ကိုကားနွင့်က္ဖောီဆိုင္ကို ခေါ်သြားတယ် ။ စားပဲခြုံ ထောင့်က်တဲ့နေရာကိုယူပြီး ဆိုင္ကလည်း လူရွင်းတော့ စကားတြေတ်ာတော်ျေပျာဖစ်ကြတယ်။ သူကလည်း သူ့ရဲ့သားက နိုင်ငျံခာမွာဘဲ ဆရာဝန်အျဖစ်နွင့် ပညာသင်ပြီး အဲ့ဒီနိုင်ငံသား ခံယူသြားတာကိုျေပျာပသလို ကျြန်တ္လောည်း ကျြန်တော့ရဲ့အေကြာင်းတြေကိျုေပျာပတယ် ။ အထီးက်န္တဲ့ အန္တီနွင်းဆီနွင့် ကျြန်တော်ဟာ အရမ်းကိုရင်းနွီးသြားတယ် ။ သူက ကျြန်တော့ကို ကေ်ာင်းသို့ကားနွင့် လိုက္ပို့ပေးတယ် ။ ကေ်ာင်းကိုရောက်တော့ ပိုးဟပ်ျဖူက သူတို့ရဲ့ရိုးရာပဲတြော်ရွိတယ်ျေပာတော့ အတန်းခ်ိန်ပြီးတာနွင့်ကို သူတို့ရိုးရာပဲတြေ္ကာိုဆင်နြဲ့ဖို့ကို သြားလိုက်ကြတယ် ။ သူ့ရဲ့အိမ္ကိုရောက်ြသားကြတယ် သူ့အိမ္ကိုရောက်တော့ စားသောက္စရာကိုမေကျြးဘဲ စဉ်အိုးလေးနွင့်အရက် တစ်အိုးကို ယူလာကာ အျမဲတြေတည္ခင်းပေးတယ် ။ အဲ့ဒီမွာဂြက်တယ် ဝက်သားမစားတျဲ့ဖူဖြေက ပိုးဟပ်ျဖူကို ထကြိုင်တော့ ပိုးဟပ်ျဖူ က မနည်းတောင်းပန်ပြီး အမဲသား အျမည်းအျဖစ်သူ့အတြက် သီးသန့်ခ်ပေးရတယ် ။ျဖူဖြေးကလည်း တမင်ညစ္တာ သူမသိဘူျးဖူဖြေးက ခရစ် အမဲသားခ်ကျြေးမွ ဝက်သားကို အတုံးလိုက် မ်ိုဆျိုပတယ် ဟားဟား ( စကားခ်ပ် ဘာသာရေး နိုင်ငံရေး လုံးဝ လုံးဝ မပါ ခင္ဗ်ား ) ပိုးဟပ်ျဖူက ဆဲမျွပန္ဖက္ကာ “” ဆ္တောီ ယောက္ဖရယ် “”ျေပာလိုက္တယ် ။
ပိုးဟပ်ျဖူရဲ့ညီမေလျးမင္ကတည်းက သေရက်နေတာတဲ့ျေပာကျာပန်ပြီး စေနာက်ရင်ျးပန်ျေပလည်ြသားမွ အိုးထဲကအရက္ကို သောက္လိုက်ကြတယ္လ။ တစ္ခြက်သောက်ပြီးတော့ ကျြန်တ္ကော စပြီးဖောက္လိုက္တယ် ။ “” ငါးလိုမသားတြေ လီးဘဲကြ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အရက္ကို သေရ တမ်မ်က်နေတာ မင်းတို့နွစ်ကောင်ကြောင့် သောက်ရတဲ့အခ်ိန် နောက္က်တယ္ကြ “”ျေပာတော့ ဟိုနွစ်ကောင္က ” “ဆ္တောီးကြာ “” လိျုေပာ့တော့ အားလုံးရယ္လိုက်ကြတယ် ။ အရက်သောက်တော့လည်း ဝါးရြက္စိမ်သမားကို ဝရဇိန်သောက္တဲ့သူက ကေ်ာ်သြားတယ် ။ အျမည်းတြေလာခ်ပေးတဲ့ပေးတဲ့ ပိုးဟပ်ျဖူညီမကျပုံျးပုံနင့်ဝင်ြသားတယ် ။ အသားရေကဘစက္ကူလျိုဖူနေတဲ့ ပိုးဟပ်ျဖူညီမေလးက လန်းနေတျာ့ဖူဖြေးက သေရတမ်ွမွ်နွင်ဲကည့်ရင်းသောက္ကာ မူးသြားတယ် ။ နေမ်ိုးကေတာ့ သူ့မွာပုံမွန္ဘဲ အမ်ားမမူးခင် သူမူးပြီး တရွူးရွူးန်င့်မြန်သံလေးတောင် ပေးလိုက်သေးတယ် ။ အားလုံးသောက်ပြီး ပိုးဟပ်ျဖူအခန်းမ်ာဘဲ ဈုပုံပြီးအိပ္လိုက်ကြတယ် ။ မနက္မွ က္ဖောီသောက်ကြေတာ့ သူ့ရဲ့အေဒ်ါနွစ်ယောက်နွင့် သူအေမ ညီမကို မိတ္ဆတ်ပေးတယ် ။ ပိုးဟပ်ျဖူက သူ့အေမနွင့်က မောင်နွမဆိုရင်တောင္မွ ယုံလို့ရတယ် ယာ သူအေမက အရြယ္တင်ပြီး တ္တောန်ရုံမင်းသမီးကို ခေါက္ထားလို့ ရတယ္ဗ် ။ အသက္က ၄၀ ဆိုပေမဲ့ ၂၉ နွစ်လောက်ရွိမယ္လို မသိသူတြေထင္မိမွာဘဲ ။ သူရဲ့အေဒ်ါတြေကလည်း ဒီအတိုင်းဘဲ တကယ့်ကို အရြယ္တင်ပြီး လွေနကြတယ် ။ အေဒ်ါတြေကလည်း လွခ်က္က ပက္စက္တယ် ။ သူတို့မိသားစုနွင့် အရမ်းရင်းနွီးသြားကြတယ် ။ သူ့အိမ္ကျပန္လာတော့ အိမ္ကိုရောက်တော့လည်း တိတ္ဆိတ္ကာျေခာက္ကပ်သလျိုဖစ်နေတယ် ။ မစဉ်းစားဘဲ အိပ်ျပစ္လိုက်လေတာ့သည်…ျပီး။
By Admins on January 03, 2020
ယခုရက်ပိုင်းတွင် မိန်းခလေးပျောက်မူများ လွန်စွာတိုးတက်လာနေပါသည် မိန်းခလေးများ အသွားအလာဂရုစိုက်ကျပါ
တင်ပါးအသားပေးပုံတွေ IGပေါ်တင်ရုံနဲ့ တစ်လကို မြန်မာငွေသိန်း ၁၄,၀၀၀ ရနေတဲ့သူမ
ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီး ..
Song Joong Ki နဲ့ ခွဲမရအောင်တူတယ်လို့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ခြိမ့်ကေကိုရဲ့ ဗီဒီယို
ဘောစိလို့ခေါ်နေကြသူတွေသိဖို့ သူမရဲ့ခက်ခဲတဲ့ဘဝအမှန်ကို မကွယ်ဝှက်ပဲ ပြောပြလာတဲ့ နန်းသူဇာ
ပရိသတ်တွေ အရမ်းကြည့်ချင်နေကြတဲ့ "Now and Ever" ရုပ်ရှင် ရုံတင်ရက်ထွက်ရှိ
Blog Archive January (16) December (100) November (269) October (456) September (101)
Book (5) Celebrity (782) Knowledge (46) News (121) Sport (23)
ကျွန်တော် ကိုမောင်မောင်ကို အတော်မကျေမနပ်ဖြစ်မိတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ….ကျွန်တော့်ပိုင်နက်ထဲက အစာကို လက်ရဲ ဇက်ရဲနဲ့ မခန့်လေးစား လုယူခဲ့တာကိုး။ ဒါကတေ...
ကျုပ်သမီး သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ ခြံထဲကားမောင်းဝင်လာတာကိုကျုပ်အိမ်ဝရန်တာကနေရပ်ကြည့်နေမိတယ်။ သမီးပြောခဲ့ဘူးတာကတော့ သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တ...
ကျြန်တော်အောင်ဇ္ကော ရွက္တတ္တဲ့ကောင်လေး တစ်ယောက္ပါ ။အရွက်ကြီးသလို အေကြာက်ကြီးသူလည်ျးဖစ္ပါတယ် ။ တက္ကသိုလ် ဒုတိယနွစ်ျေဖပြီးမွ အရွက်ကြောက်ကြီးသူကေ...
ဗမာပြည်က နာစ့်လေးတွေက ဖင်လုံးလုံးလေးတွေဆို အရမ်းချစ်စရာကောင်းတာ။ ထမီ ကြက်သွေးရောင်လေးနောက်မှာ လုံးတံုးတုံးနဲ့ ဘယ်ညာရွေ့သွားတာလေးတွေကြည့်ရတ...